နစေ့ဉျသောကျနတေဲ့ ၁၀၀ တနျ ကျောဖီမဈထုပျကို ကျောဖီမှုနျ့အစဈနဲ့ လုပျတယျလို့ ထငျနကွေတုနျးပဲလား? – Youth Bar
နစေ့ဉျသောကျနတေဲ့ ၁၀၀ တနျ ကျောဖီမဈထုပျကို ကျောဖီမှုနျ့အစဈနဲ့ လုပျတယျလို့ ထငျနကွေတုနျးပဲလား??
ကျောဖီမဈမှာ ပစ်စညျး ၃ မြိုးပါဝငျ ပါတယျ။ ၁။ကျောဖီမှုနျ့ ၂။ သကွား ၃။ ကျောဖီမိတျ
၁။ ကျောဖီမှုနျ့က မူလက ကျောဖီစကေ့နေ တဆငျ့ပွုလုပျထားတဲ့ ခကျြခငျြး အရညျပြျောစနေိုငျတဲ့ အသငျ့ဖြျောကျောဖီမှုနျ့ ကို သုံးကွပါတယျ ။ အခု နောကျပိုငျး ပိုစြေးသကျသာတဲ့ ကျောဖီမှုနျ့ အတုတှေ သုံးလာကွပါတယျ။
ကုနျကစြရိတျက အဆ ၁၀၀ – အဆ ၂၀၀ အထိ သကျသာတယျလို့ ထိုငျဝမျက အစားအသောကျ ပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ ။ ထိုငျဝမျမှာ ကျောဖီမှုနျ့ အတုကို ပဲစိမျးအမှုနျ့ ၊ ကျောဖီရနံ့ လို့ချေါတဲ့ ဓာတုဗဒေ ကျောဖီမှုနျနဲ့ ရော လိုကျတာပါ ။ အဲဒါကို သကွား ကျောဖီမိတျ တှနေဲ့ ရော ဖြျော လိုကျတဲ့ အခါ ကျောဖီ အစဈနဲ့ ခှဲ လို့ မရ တော့ပါဘူး။
ဒီလို လုပျတာ စိတျကောငျးရှိတဲ့ ထုတျလုပျသူတဲ့။ တခြို့က ပဲစိမျးမှုနျု့ မထညျ့ဘဲ မီးသှေးမှုနျ့တှေ ထညျ့လုပျကွတယျ။ ကျောဖီရနံ့ လို့ချေါတဲ့ ဓာတုဗဒေ ကျောဖီတှဟော အသညျးနဲ့ ကြောကျကပျကို ထိခိုကျ နိုငျတယျ လို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောကွပါတယျ ။ ထိုငျဝမျ FDA က ကျောဖီမှုနျ့ အတု ၊ ကျောဖီရနံ့တှကေို တရားဝငျ ရောငျးခခြှငျ့ပွုထားတဲ့ အတှကျ ကျောဖီမှုနျ့ အတု နဲ့ လုပျထားတဲ့ ကျောဖီတှေ ရောငျးခနြကွေပါတယျ ။
ကျောဖီမှုနျ့ အတုတှကေို ပဲစိမျးမှုနျ့နဲ့ လုပျတဲ့အတှကျ ပရိုတိနျးဓာတျတော့ နညျးနညျး ရနိုငျပါတယျ ။ မီးသှေးမှုနျ့က အစားအသောကျမှာ သုံးတာ ရှိပါတယျ ။ ထိုငျဝမျမှာ မီးသှေးမှုနျ့နဲ့လုံးထားတဲ့ မွပေဲ ရှိပါတယျ ။ အမရေိကနျမှာ ခြားကိုးလျမိုခါး ဆိုပွီး ခြောကလကျမှုနျ့ ၊ မီးသှေးမှုနျ့ ၊ သကွား ၊ ကျောဖီမိတျတှပေါတဲ့ ဖြျောရညျ ရောငျးပါတယျ ။
မီးသှေးမှုနျ့က အုနျးမုတျခှကျက ရတဲ့ မီးသှေးမှုနျ့ လို့ ဖျောပွထားပါတယျ ။ ဟိုတလောက မွနျမာပွညျက ကျောဖီမဈ စကျရုံကို အုနျးမှုတျခှကျတှေ ပို့တဲ့ ဆောငျးပါး တဈပုဒျ ဖဘ မှာ တှလေို့ကျတယျ ။ အုနျးမှုတျခှကျကို မီးသှေးမှုနျ့ လုပျပွီး ကျောဖီမဈ ထဲ ထညျ့တာလားတော့ မသိဘူး ပေါ့လေ ။ ထငျတာ ပွောတာပါ။
ပိုဆိုးတာကတော့ အဆိပျပါတဲ့ ကျောဖီမှုနျ့တှပေါ။ ၂၀၁၈ ခု ဧပွီလမှာ ဗီယကျနမျ နိုငျငံရှိ ကျောဖီစကျရုံ တဈခုကိုစဈဆေးကွညျ့တဲ့ အခါ ဓာတျခဲ အဟောငျးတှကေ ရတဲ့ အမညျးရောငျ အမှုနျ့တှကေို သုံးပွီး ကျောဖီစတှေ့ကေို ဆေးဆိုးတာ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ ။
ဓာတျခဲ အဟောငျးတှကေရတဲ့ အမှုနျ့ ၃၅ ကီလိုဂရမျ တှရှေိ့ခဲ့ပွီး ဒီအမှုနျ့တှကေို အပေါစား ကျောဖီစတှေ့ေ ဝယျပွီး အရောငျလှအောငျ ဆေးဆိုးတယျဆိုတာ ပိုငျရှငျက ဝနျခံခဲ့ပါတယျ ။ ဓာတျခဲက ရတဲ့ အမှုနျ့တှမှော မဂ်ဂနီးဈဒိုငျအောကျဆိုဒျ ဆိုတဲ့ အဆိပျဓာတျ ပါတဲ့ အတှကျ ဒီကျောဖီမှုနျ့တှေ ရရှေညျ သောကျသုံးသူတှမှော ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောတှေ ပကျြစီးစပေါတယျ ။ ဒီလို အဆိပျပါတဲ့ ကျောဖီစေ့ ၁၀ တနျကြျောကို သိမျးဆညျး ရမိပွီး ၃ တနျ ကြျောက စြေးကှကျထဲကို ရောငျးခပြွီး ဖွဈပါတယျ ။
ဒီသတငျးဟာ ကျောဖီ သောကျသုံးသူမြားကို အထိတျတလနျ့ ဖွဈသှား စခေဲ့ပါတယျ ။ ထိုငျဝမျကို ဗီယကျနမျကျောဖီ တံဆိပျ ၁၅ မြိုး တငျသှငျးခှငျ့ပွုထားတာမို့ ဒီလို အဆိပျပါတဲ့ ကျောဖီ ၊ ကျောဖီ မှုနျ့တှေ မဝငျဘူး လို့ ဘယျသူမှ အာမ မခံနိုငျခဲ့ပါဘူး ။
၂။ သကွားကတော့ အရညျပြျောလှယျတဲ့ အမှုနျ့နုတဲ့ သကွား ကို သုံးပါတယျ ။
၃။ ကျောဖီမိတျ ကို ၁၉၆၁ ခုမှာ အမရေိကနျ နကျဈတယျကုမ်ပဏီက စထုတျခဲ့ပါတယျ ။ နှားနို့နှငျ့မပွုလုပျ ထားသော မလိုငျအဆီ ပါ။ ဘာတှနေဲ့ လုပျထားတာလဲ ဆိုတာ ဒေါကျတာဒျေါခငျနှယျဝငျး ဆောငျးပါးကို ဖတျကွညျ့ ရအောငျ ။
ကျောဖီ သောကျ ရငျ အသုံးပွု သညျ့ နှားနို့နှငျ့ မပွုလုပျထား သော အမှုနျ့မျြာဟာ ၊ ဘာ တှေ ပါ နေ တာ ပါ သ လဲ ?
၁။ ပွောငျးဖူး မှ လာ သော သ ကွား ၂။ နို့ထညျ့ ထား သ ကဲ့ သို့ ၊ ဖွဈ နေ တာ က တော့ ပဲပိစပျဆီ ကွောငျ့ ဖွဈ ပါ တယျ။ ၃။ ဆိုဒီယမျ ကကျစီနိတျ နှားနို့မှာ ပါဝငျ သော ပရိုတငျးဓာတျ ဖွဈ ပါ တယျ။ သူ ဟာ ဒွဗျဝတ်ထု မြား မပွိုကှဲ စေ ရနျ ထညျ့ သညျ့ ဓာတု ပစ်စညျး တဈခု ဖွဈ ပါ တယျ။ ၄။ မိုနိုဂလိုငျစီရိတျ နှငျ့ ဒိုငျဂလိုငျစီရိတျ – ပါဝငျ နေ သော ပစ်စညျး မြား ရောစပျ ရာ တှငျ ကောငျးစှာ သမ ၍ တဈသားတညျး ဖွဈ စေ ရနျ အတှကျ ထညျ့ ရ သော ဝတ်ထု ပစ်စညျး ကျောဖီ နှငျ့ အမှုနျ့တဈသားတညျး ဖွဈ နေ စေ ရနျဖွဈ ပါ တယျ။ ၅။ ဖော့စဖိတျ အကျဆဈ ခပျ ပွဈပွဈ က လေး ဖွဈ နေ စေ ပွီး ၊ ပါဝငျ နေ သော ပစ်စညျး မြား တစုတစညျး တညျး တဈပေါငျး တညျး ဖွဈ နေ စေ ရနျ ဖွဈ စေ သော ဓာတုပစ်စညျး
သွျော စဉျးစား ကွညျ့ မယျ ဆို ရငျ အိပျယာ က နိုး လာ သညျ့အခါ သောကျ တော့ မညျ့ ကျောဖီ ခှကျ ထဲ မှာ ဒီ ဓာတုဆေး မြိုးစုံကို ထညျ့ ပွီး သောကျ ခငျြ ပါ သ လား ဆို တဲ့ မေးခှနျး ပျေါ ထှကျ လာပါ တယျ။
အခြို့ အမှုနျ့ဆိုရငျ အရသာ အမြိုးမြိုး ထှကျ အောငျ ထပျ ပွီး ရောနှော ထား သညျ့ ဓာတုဆေး တှေ လဲ အပို ပါပါ သေး တယျ။
ဒီကျောဖီမိတျတှေ ဟာ အမှုနျ့အနေ နဲ့ လာသလို အရညျ အဖွဈ နဲ့ လဲ ရောငျး ခြ လေ့ ရှိ ပါ တယျ။
အမှုနျ့မှာ က ခဲ မသှား ရ အောငျ ဓာတုဆေး တဈ မြိုး ထပျ ပွီး ပါ ပွနျ ပါ တယျ။ ဆိုဒီယမျ အလူမီနိုဆီလီကိတျ ဖွဈ ပါ တယျ။ လောငျကြှမျး စေ တတျ သော ဓာတျ တဈ မြိုး လဲ ဖွဈ ပါ တယျ။ အင်ျဂလိပျ လိုဖတျ ရနျ ခကျခဲ မှု ရှိ သူ မြား အတှကျ ဘာသာ ပွနျ ပေးလိုကျ ခွငျး သာ ဖွဈ ပါ တယျ။ ကြှနျမ ၏ အာဘျော မဟုတျပါ။(ဒေါကျတာဒျေါခငျနှယျဝငျး ဆောငျးပါးမှ ကူးယူ ဖျောပွပါသညျ။)
ကျောဖီမိတျ ဟာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျမှု ရှိမရှိ ။ ကျောဖီမိတျမှာ သကွား ၊ မကောငျးတဲ့အဆီ၊ တာရှညျ အထားခံဆေး ပဲပါလို့ ကနျြးမာရေး အတှကျ မကောငျးပါ ။
ကျောဖီမိတျလုပျတဲ့ ဖျောမွူလာတှကေ နှဈကွာလာတာနဲ့ အမြှ ပွောငျးလဲမှုတှေ ရှိလာပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ အရောငျခြှတျ သကွား နဲ့ တာရှညျခံဆေးတှပေဲ ပါတော့တဲ့ ပစ်စညျး တဈခု ဖွဈလာပါပွီ။
ပွောငျးဖူးမှလာသော သကွား – ပွောငျးဖူးတှေ အမြားစုက မြိုးရိုးဗီဇ ပွောငျးထားတာတှပေါ။ သကွားတှကေ လူကို အဝလှနျစပေါတယျ ။ ကိုယျတှငျး ကလီစာတှမှော အဆီတှေ စုပွီး ဆီးခြို ၊ သှေးတိုး ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ကငျဆာ တှေ ဖွဈပှားစပေါတယျ ။ တခြို့ အငျဇိုငျးတှကေို ထိခိုကျစပွေီး ခန်ဓာကိုယျ အတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ စုတျယူခွငျးကို လြော့နညျး စပေါတယျ ။
ပဲပိစပျ ဆီ က တာရှညျခံအောငျ လုပျထားတဲ့ဆီ ပါ။ ခန်ဓာကိုယျ အတှကျ ဆိုးကြိုးပေးတဲ့ အဆီပါ ။ သှေးတှငျး အဆီမြားမှုကို အားပေးပွီး နှလုံးသှေးကွောရောဂါ အဖွဈမြားစပေါတယျ ။
နောကျဓာတု ပစ်စညျးတမြိုးဖွဈတဲ့ ဖော့စဖိတျအကျဆဈ က ဓာတျမွသွေဇာနဲ့ အလှကုနျ ပစ်စညျးတှေ မှာလညျး သုံးပါတယျ။
ကျောဖီမိတျမှာ ဘာ အာဟာရဓာတျမှ မပါတဲ့ အပွငျ ကနျြးမာရေး အတှကျ ဆိုးကြိုးသာ ဖွဈစတောမို့ နှားနို့ ၊ အုနျးနို့ ၊ ပြားရညျ စသညျတို့ အစားထိုး သုံးဖို့ အကွံပေးကွပါတယျ ။
ကျောဖီမှုနျ့ အစဈနဲ့လုပျတဲ့ ကျောဖီမဈ အထုတျတှလေညျး ရှိပါတယျ ။ စြေးပေါတဲ့ ကျောဖီမဈတှကေတော့ သကွားတောငျ စြေးပေါတဲ့ဆေးသကွား ၊ အပေါစား ကျောဖီမိတျတှေ သုံးတာပါ ။ တဈထုတျလုံးက ဓာတု ပစ်စညျးတှပေါပဲ ။
တီးမဈကလညျး ထိုနညျး၎င်းငျးပါပဲ ။ သဘာဝ လကျဖကျခွောကျက ထုတျတာရှိသလို ဓာတု ပစ်စညျးတှနေဲ့ ထုတျထားတာတှလေညျး ရှိပါတယျ ။
ကဲ ကျောဖီမဈ ၊ တီးမဈ သောကျကွဦးမလား ဗြို့ ။
Crd: U Myomyat Thu
နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား??
ကော်ဖီမစ်မှာ ပစ္စည်း ၃ မျိုးပါဝင် ပါတယ်။ ၁။ ကော်ဖီမှုန့် ၂။ သကြား ၃။ ကော်ဖီမိတ်
၁။ ကော်ဖီမှုန့်က မူလက ကော်ဖီစေ့ကနေ တဆင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချက်ချင်း အရည်ပျော်စေနိုင်တဲ့ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီမှုန့် ကို သုံးကြပါတယ် ။ အခု နောက်ပိုင်း ပိုဈေးသက်သာတဲ့ ကော်ဖီမှုန့် အတုတွေ သုံးလာကြပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်က အဆ ၁၀၀ – အဆ ၂၀၀ အထိ သက်သာတယ်လို့ ထိုင်ဝမ်က အစားအသောက် ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ်မှာ ကော်ဖီမှုန့် အတုကို ပဲစိမ်းအမှုန့် ၊ ကော်ဖီရနံ့ လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဗေဒ ကော်ဖီမှုန်နဲ့ ရော လိုက်တာပါ ။ အဲဒါကို သကြား ကော်ဖီမိတ် တွေနဲ့ ရော ဖျော် လိုက်တဲ့ အခါ ကော်ဖီ အစစ်နဲ့ ခွဲ လို့ မရ တော့ပါဘူး။
ဒီလို လုပ်တာ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတဲ့။ တချို့က ပဲစိမ်းမှုန်ု့ မထည့်ဘဲ မီးသွေးမှုန့်တွေ ထည့်လုပ်ကြတယ်။ ကော်ဖီရနံ့ လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဗေဒ ကော်ဖီတွေဟာ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက် နိုင်တယ် လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ် FDA က ကော်ဖီမှုန့် အတု ၊ ကော်ဖီရနံ့တွေကို တရားဝင် ရောင်းချခွင့်ပြုထားတဲ့ အတွက် ကော်ဖီမှုန့် အတု နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီတွေ ရောင်းချနေကြပါတယ် ။
ကော်ဖီမှုန့် အတုတွေကို ပဲစိမ်းမှုန့်နဲ့ လုပ်တဲ့အတွက် ပရိုတိန်းဓာတ်တော့ နည်းနည်း ရနိုင်ပါတယ် ။ မီးသွေးမှုန့်က အစားအသောက်မှာ သုံးတာ ရှိပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ်မှာ မီးသွေးမှုန့်နဲ့လုံးထားတဲ့ မြေပဲ ရှိပါတယ် ။ အမေရိကန်မှာ ချားကိုးလ်မိုခါး ဆိုပြီး ချောကလက်မှုန့် ၊ မီးသွေးမှုန့် ၊ သကြား ၊ ကော်ဖီမိတ်တွေပါတဲ့ ဖျော်ရည် ရောင်းပါတယ် ။
မီးသွေးမှုန့်က အုန်းမုတ်ခွက်က ရတဲ့ မီးသွေးမှုန့် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ဟိုတလောက မြန်မာပြည်က ကော်ဖီမစ် စက်ရုံကို အုန်းမှုတ်ခွက်တွေ ပို့တဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ဖဘ မှာ တွေ့လိုက်တယ် ။ အုန်းမှုတ်ခွက်ကို မီးသွေးမှုန့် လုပ်ပြီး ကော်ဖီမစ် ထဲ ထည့်တာလားတော့ မသိဘူး ပေါ့လေ ။ ထင်တာ ပြောတာပါ။
ပိုဆိုးတာကတော့ အဆိပ်ပါတဲ့ ကော်ဖီမှုန့်တွေပါ။ ၂၀၁၈ ခု ဧပြီလမှာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံရှိ ကော်ဖီစက်ရုံ တစ်ခုကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ ဓာတ်ခဲ အဟောင်းတွေက ရတဲ့ အမည်းရောင် အမှုန့်တွေကို သုံးပြီး ကော်ဖီစေ့တွေကို ဆေးဆိုးတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဓာတ်ခဲ အဟောင်းတွေကရတဲ့ အမှုန့် ၃၅ ကီလိုဂရမ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒီအမှုန့်တွေကို အပေါစား ကော်ဖီစေ့တွေ ဝယ်ပြီး အရောင်လှအောင် ဆေးဆိုးတယ်ဆိုတာ ပိုင်ရှင်က ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။ ဓာတ်ခဲက ရတဲ့ အမှုန့်တွေမှာ မဂ္ဂနီးစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဆိုတဲ့ အဆိပ်ဓာတ် ပါတဲ့ အတွက် ဒီကော်ဖီမှုန့်တွေ ရေရှည် သောက်သုံးသူတွေမှာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်စီးစေပါတယ် ။ ဒီလို အဆိပ်ပါတဲ့ ကော်ဖီစေ့ ၁၀ တန်ကျော်ကို သိမ်းဆည်း ရမိပြီး ၃ တန် ကျော်က ဈေးကွက်ထဲကို ရောင်းချပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီသတင်းဟာ ကော်ဖီ သောက်သုံးသူများကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွား စေခဲ့ပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ်ကို ဗီယက်နမ်ကော်ဖီ တံဆိပ် ၁၅ မျိုး တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာမို့ ဒီလို အဆိပ်ပါတဲ့ ကော်ဖီ ၊ ကော်ဖီ မှုန့်တွေ မဝင်ဘူး လို့ ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
၂။ သကြားကတော့ အရည်ပျော်လွယ်တဲ့ အမှုန့်နုတဲ့ သကြား ကို သုံးပါတယ် ။
၃။ ကော်ဖီမိတ် ကို ၁၉၆၁ ခုမှာ အမေရိကန် နက်စ်တယ်ကုမ္ပဏီက စထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ နွားနို့နှင့်မပြုလုပ် ထားသော မလိုင်အဆီ ပါ။ ဘာတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ ဆိုတာ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့် ရအောင် ။
ကော်ဖီ သောက် ရင် အသုံးပြု သည့် နွားနို့နှင့် မပြုလုပ်ထား သော အမှုန့်မျာ်ဟာ ၊ ဘာ တွေ ပါ နေ တာ ပါ သ လဲ ?
၁။ ပြောင်းဖူး မှ လာ သော သ ကြား ၂။ နို့ထည့် ထား သ ကဲ့ သို့ ၊ ဖြစ် နေ တာ က တော့ ပဲပိစပ်ဆီ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။ ၃။ ဆိုဒီယမ် ကက်စီနိတ် နွားနို့မှာ ပါဝင် သော ပရိုတင်းဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ ဟာ ဒြဗ်ဝတ္ထု များ မပြိုကွဲ စေ ရန် ထည့် သည့် ဓာတု ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ ၄။ မိုနိုဂလိုင်စီရိတ် နှင့် ဒိုင်ဂလိုင်စီရိတ် – ပါဝင် နေ သော ပစ္စည်း များ ရောစပ် ရာ တွင် ကောင်းစွာ သမ ၍ တစ်သားတည်း ဖြစ် စေ ရန် အတွက် ထည့် ရ သော ဝတ္ထု ပစ္စည်း ကော်ဖီ နှင့် အမှုန့်တစ်သားတည်း ဖြစ် နေ စေ ရန်ဖြစ် ပါ တယ်။ ၅။ ဖော့စဖိတ် အက်ဆစ် ခပ် ပြစ်ပြစ် က လေး ဖြစ် နေ စေ ပြီး ၊ ပါဝင် နေ သော ပစ္စည်း များ တစုတစည်း တည်း တစ်ပေါင်း တည်း ဖြစ် နေ စေ ရန် ဖြစ် စေ သော ဓာတုပစ္စည်း
သြော် စဉ်းစား ကြည့် မယ် ဆို ရင် အိပ်ယာ က နိုး လာ သည့်အခါ သောက် တော့ မည့် ကော်ဖီ ခွက် ထဲ မှာ ဒီ ဓာတုဆေး မျိုးစုံကို ထည့် ပြီး သောက် ချင် ပါ သ လား ဆို တဲ့ မေးခွန်း ပေါ် ထွက် လာပါ တယ်။
အချို့ အမှုန့်ဆိုရင် အရသာ အမျိုးမျိုး ထွက် အောင် ထပ် ပြီး ရောနှော ထား သည့် ဓာတုဆေး တွေ လဲ အပို ပါပါ သေး တယ်။
ဒီကော်ဖီမိတ်တွေ ဟာ အမှုန့်အနေ နဲ့ လာသလို အရည် အဖြစ် နဲ့ လဲ ရောင်း ချ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
အမှုန့်မှာ က ခဲ မသွား ရ အောင် ဓာတုဆေး တစ် မျိုး ထပ် ပြီး ပါ ပြန် ပါ တယ်။ ဆိုဒီယမ် အလူမီနိုဆီလီကိတ် ဖြစ် ပါ တယ်။ လောင်ကျွမ်း စေ တတ် သော ဓာတ် တစ် မျိုး လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လိုဖတ် ရန် ခက်ခဲ မှု ရှိ သူ များ အတွက် ဘာသာ ပြန် ပေးလိုက် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ ၏ အာဘော် မဟုတ်ပါ။(ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဆောင်းပါးမှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
ကော်ဖီမိတ် ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ ။ ကော်ဖီမိတ်မှာ သကြား ၊ မကောင်းတဲ့အဆီ၊ တာရှည် အထားခံဆေး ပဲပါလို့ ကျန်းမာရေး အတွက် မကောင်းပါ ။
ကော်ဖီမိတ်လုပ်တဲ့ ဖော်မြူလာတွေက နှစ်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ အရောင်ချွတ် သကြား နဲ့ တာရှည်ခံဆေးတွေပဲ ပါတော့တဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။
ပြောင်းဖူးမှလာသော သကြား – ပြောင်းဖူးတွေ အများစုက မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းထားတာတွေပါ။ သကြားတွေက လူကို အဝလွန်စေပါတယ် ။ ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေမှာ အဆီတွေ စုပြီး ဆီးချို ၊ သွေးတိုး ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ကင်ဆာ တွေ ဖြစ်ပွားစေပါတယ် ။ တချို့ အင်ဇိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ စုတ်ယူခြင်းကို လျော့နည်း စေပါတယ် ။
ပဲပိစပ် ဆီ က တာရှည်ခံအောင် လုပ်ထားတဲ့ဆီ ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ အဆီပါ ။ သွေးတွင်း အဆီများမှုကို အားပေးပြီး နှလုံးသွေးကြောရောဂါ အဖြစ်များစေပါတယ် ။
နောက်ဓာတု ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ ဖော့စဖိတ်အက်ဆစ် က ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေ မှာလည်း သုံးပါတယ်။
ကော်ဖီမိတ်မှာ ဘာ အာဟာရဓာတ်မှ မပါတဲ့ အပြင် ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးကျိုးသာ ဖြစ်စေတာမို့ နွားနို့ ၊ အုန်းနို့ ၊ ပျားရည် စသည်တို့ အစားထိုး သုံးဖို့ အကြံပေးကြပါတယ် ။
ကော်ဖီမှုန့် အစစ်နဲ့လုပ်တဲ့ ကော်ဖီမစ် အထုတ်တွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ဈေးပေါတဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေကတော့ သကြားတောင် ဈေးပေါတဲ့ဆေးသကြား ၊ အပေါစား ကော်ဖီမိတ်တွေ သုံးတာပါ ။ တစ်ထုတ်လုံးက ဓာတု ပစ္စည်းတွေပါပဲ ။
တီးမစ်ကလည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ ။ သဘာဝ လက်ဖက်ခြောက်က ထုတ်တာရှိသလို ဓာတု ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်ထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။
ကဲ ကော်ဖီမစ် ၊ တီးမစ် သောက်ကြဦးမလား ဗျို့ ။
ဒီလိုစာမြိုးမှမဖတျရငျ သငျနောငျတရလိမျ့မယျ(တဈခြိနျခြိနျအသုံးဝငျလာမှာပါ /သငျ့ဖုနျးထဲမှာ သိမျးထားပါ)